यस्ती छिन् रचनाकि हट एण्ड बोल्ड छोरी अन्ना (हेरौँ १९ तस्बिर) - Sindhuli Saugat
यस्ती छिन् रचनाकि हट एण्ड बोल्ड छोरी अन्ना (हेरौँ १९ तस्बिर)
मिस नेपालको अडिसनमा कन्टेसटेन्टलाई बिना मेकअप आएको भन्दै हप्काएको भिडियो भाइरल भएपछि विवादित बनेकि रचना गुरुङको छोरी नेपाली चलचित्रकि चर्चित नायिकामा गन्निछिन् । अन्ना र अमालिया शर्मा मिस नेपालको कोरियोग्राफर रचना गुरुङ शर्माका छोरी हुन् । एनाको चाहना सानैबाट चलचित्र खेल्ने थियो । जुन चाहना जेरी फिल्मबाट शुरु भयो ।
अन्ना नेपाली चलचित्रको नयाँ आशाका रुपमा गनिएकि छिन् । उनको अश्लि नाम भने अन्नपुर्ण शर्मा हो । सानैदखि आफ्नी आामाले मिस नेपालको कोरियोग्राफ गरेको देखेर मिस नेपालमा आउन मन नलागेको बताउने अन्ना अहिले नेपाली चलचित्रको चर्चित नायिका हुन् । उनको ग्याङस्टर ब्लूज, मेन फ्रम काठमाडौँ र जेरि फिल्ममा अभिनय गरिसकेकि छिन् । उनको नयाँ फिल्म द मेन फ्रम काठमाडौँ गत चैत १ गते सार्वजनिक भएको थियो ।
तस्बिरहरु तल छ ।
भिडियोमा देखिने निर्णायक रचना गुरुङ मिस नेपालमा २५ वर्षदेखि आबद्ध छिन् । भिडियोलाई लिएर उनी छक्क छिन् । कुराको प्रसंग नखुलाई अघिपछिको भाग फालेर आफूलाई नराम्रो देखाउन खोजेको उनले बताइन् ।
‘त्यति भाग मात्रै काटेर राखेको छ,’ उनले भनिन्, ‘उनी उत्कृष्ट २५ मा छानिएकी छन् । ऊ नयाँ कुरा सिक्न इच्छुक छ । म त उसलाई देखेर गर्व गर्छु ।’ गुरुङले आफूलाई नराम्रो देखाएर आफू चर्चित फेसबुक प्रयोगकर्ताले यो सब गरेको बताइन् । ‘कुनै मान्छेले खेल खेलेको हो,’ उनले भनिन् ।
मेरा छोरीहरूलाई समेत अप्ठ्यारो परिहरको छ ।’ रचना अभिनेत्री आना शर्माकी आमा हुन् । युट्युबमा उपलब्ध पूरा भिडियोमा आफूले प्रसंगसहित उक्त प्रश्न राखेको रचनाको दाबी छ । यसबारे हिडन ट्रेजरले केही दिनमा प्रस्टीकरण दिने उनले बताइन् ।
‘मलाई मेकअप गर्न आउँदैन’ भन्दा गाली खाएकी युवती कन्टेस्टेन्ट नं. ८
मिस नेपाल प्रतियोगिता ‘ब्युटी विथ नो ब्रेन’ भन्ने मान्यतासहित बदनाम छ। तर गएको वर्षकी मिस नेपाल ‘श्रृंखला खतिवडा’ ले विश्वमाझ नेपाललाई परिचित गराउन सफल भइन्। उनलाई धेरैले सहयोग गरे, चीनमा भएको विश्व सुन्दरी प्रतियोगीतामा उनको सहभागितालाई गौरवको विषय मानियो।
हरेक वर्ष हिडन ट्रेजरले मिस नेपालको नयाँ संस्करण ल्याउँछ। सन् २०१९ को लागि केही समय अगाडिमात्र आवेदन खुलेको थियो। यही सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस नेपाल सन् २०१९ की एक सहभागी अस्मिता महर्जनले अडिसनमा आफूलाई मेकअफ गर्न आउँदैन भन्दा निर्णायक रचना शर्मा गुरुङको मार गाली खाएकी थिइन्। उनी अहिले मिस नेपालको आठौँ नम्बरकी सहभागी भएकी छन्।
केही दिनअगाडि निर्णायक गुरुङले मेकअप किन नगरेको भन्दा अस्मिताले ‘मेकअप गर्न आउँदैन तर म सिक्छु’ भनेकी थिइन्। रचनाले भने यो २१ औँ शताब्दी हो, प्रतियोगितामा आउँदा मेकअप नगरी आउनु अपमानजनक भएको बताएकी छन्।
अस्मिताले आफू जसरी आउन सहज भएको उसै गरी आएको बताएकी छन्। प्रतियोगीले चश्मा लगाएको विषयमा पनि गुरुङले प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। माइनस ५ पावरको चश्मा लगाएकी अस्मितालाई कन्ट्याक्ट लेन्स लगाउनुपर्ने भन्दै प्रतिक्रिया दिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो।
सामाजिक सञ्जालमा कोरियोग्राफर गुरुङको आलोचना भइरहेको छ। साथै सुन्दरी प्रतियोगितालाई पनि नराम्रो रुपमा व्याख्या गरिएको छ।
यसरी गालि खाएकी प्रतियोगी अस्मिता भने टप २६ मा पुगेकी छन्। उनले फेसबुकमा फोटो सुटमा भएको जानकारी दिँदै आफू कन्टेस्टेन्ट नं ८ भएको जानकारी गराएकी छन्। देशसंचारबाट साभार
मिस नेपालमा ‘मोडल’को खोजी की ‘रोल मोडल’को ?
उक्त घटना पछि मिस नेपाललाई महिलाको रुप बेच्ने कारखाना भन्दै कतिपय महिलाले नै विरोध गर्ने गर्छन् । यतिबेला भने मिस नेपाल अर्कै कारणले चर्चामा आएको हो । कारण हो, मिस नेपालमा सोधिएको एउटा प्रश्न ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा डाक्टर कल्याणले आफ्नो फेसबूक पेजमा एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेर लेखेका छन (‘मिस नेपाल अडिसन, यो क्लिप हेरेर मनमा आएको कुरा तल लेख्नुहोला ।’ डाक्टर कल्याणले आफ्नो फेसबूक पेजमा राखेको भिडियोमा आएको प्रतिकृया हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
खासमा क्लिपमा के छ ?
निर्णायकले अन्तिम निर्णय सुनाउँदै भन्छिन् – ‘तिमी सिकेर आऊ । तिमीले मिस नेपालको प्लेटफर्मलाई अनादर र्गयौ ।’
प्रतियोगीले उत्तर दिन्छिन् – ‘( ५ ।’
यो भिडियो क्लिप सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले मेकअपलाई मिस नेपालमा अनिवार्य बनाएको र मेकअप गर्न नजान्ने सुन्दरीहरुलाई अपमान गरेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
भिडियोमा कतिले निर्णायकका तर्फबाट मेकअपलाई लिएर प्रश्न सोध्ने रचना गुरुङ शर्माको विरोध गरेका छन् । कतिपयले मेकअप गरेकी रचनाभन्दा प्रतियोगी नै ‘राम्री’ देखिएको भन्दै निर्णायकको मजाक उडाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको यो भिडियोमा मेकअप नगरेर मिस नेपाललाई अनादर गरेको आरोप समेत लगाइएको छ । भिडियो फुटेज सार्वजनिक भएपछि मेकअपलाई नभएर बौद्धिकतालाई सम्मान गर्नुपर्ने धारणा धेरैको छ । उक्त भिडियो फुटेजलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा युवापुस्ताको निरन्तर विरोध भइरहेको छ ।
अहिले सामाजिक संजालमा उनलाई दर्शकले गालीको बर्षा नै दिएका छन् । अश्मितालाई भने बिना मेकअप नै राम्री देखिएको भदै तारिफ गरेका छन् । तिनै सहभागी महर्जन अब प्रतियोगिताको अघिल्लो चरणमा पुगेकी छन्। एक फेसबुक पोस्ट मार्फत उनले यसबारे जानकारी गराइन् । उनले केहि समय अघि मात्रै ‘रोड टु मिस नेपाल २०१९’ भन्दै एक फेसबुक पोस्ट गरेकी थिइन् ।
के भएको थियो मिस नेपाल अडिसनमा? किन तात्यो सामाजिक सञ्जाल ?
कृष्ण आलेले चाहिँ निर्णायकको बोली रुखो भएको आशयमा आफ्ना विचार राखेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘निर्णायकले आफू मात्रै यो संसारको राम्री र स्मार्ट हुँ भने जसरी बोलेको देखिन्छ । प्रतियोगी युवतीलाई प्रेरणा दिनुको सट्टा उपेक्षा गरेको देखिन्छ । मेकअपबिनाको सौन्दर्यमा दिव्यज्योति हुन्छ भन्ने तिनलाई थाहा रहेनछ ।’ भिडियोमा देखिएकी युवती ललितपुरकी अस्मिता महर्जन हुन् । उनले बिहीबार मात्रै आफू मिस नेपालमा छानिएको र त्यसतर्फको यात्रा प्रारम्भ भएकोमा खुसी जनाउँदै फेसबुकमा स्टाटस पोस्ट गरेकी छन् । ‘प्रतियोगी नम्बर ८,’ उनले ह्यास्ट्यागमा लेखेकी छन्, ‘ह्याप्पी डेज ।’ त्यसको आठ घण्टापछि उनको अडिसन लिइएको भिडियो फुटेज भाइरल भयो । अस्मिताले भाइरल भिडियोलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा कुनै प्रतिक्रिया दिएकी छैनन् । मिस नेपाल शृंखला खतिवडाले ‘नो मेकअप एन्ड स्टिल ब्युटिफुल’ भन्दै आफ्नो फोटो ट्वीट गरेकी छन् । पूर्व्मिस नेपाल निकिता चाण्डकले यो के भइरहेछ भन्नेबारे आफूले नबुझेको बताइन् । ‘म पनि मेकअप बेगर नै अडिसन दिन गएकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘ड्रेसअपको तरिका र प्रस्तुति शैलीबारे आइडिया थिएन । मलाई यसबारे प्रश्न सोधिएन ।’ कतिलाई मेकअपमा रुचि नहुने र सबैले सौन्दर्य प्रतियोगिता नपछ्याउने भएकाले बाहिरी आवरणलाई मुद्दा बनाउनु ठीक नभएको उनको भनाइ थियो ।
फोटो हेर्ने तरिकाः फोटोमा एक क्लिक गर्नुहोस् र दाइने देब्रे मेबाइल कोल्टाउनुहोस्
तस्बिरहरु अन्ना शर्माको इन्स्टाग्रामबाट
पछिल्लाे - नेपालमै पहिलो पटक सिन्धुलीमा गो बेबी गो कार्यक्रम सुरु
अघिल्लाे - सुनकोशी नदिमा एक जना वेपत्ता